I-Huawei Y7 Prime 2019 kunye ne-Huawei Y7 Pro 2019: Iinkcukacha ezisemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019: Uluhlu olutsha lokungena lwegama
IHuawei isishiya neendaba ezaneleyo kwiiyure zokugqibela. Kunye neY9 Prime 2019, ifowuni yakho yekhamera entsha enokutsalwa. Uhlobo ngoku lubonisa iimodeli zalo ezisezantsi ezisezantsi, IHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019. Ezi modeli zintsha zibonakaliswa kukucaciswa kokuthozama, kodwa kuya kufuneka zifike ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Ezi Huawei Y7 Prime 2019 zintsha kunye neHuawei Y7 Pro 2019 ziifowuni ezifanayo. Ngapha koko, sinokucaciswa okufanayo kwezi zimbini, kodwa sifumana umahluko omnye kuphela. Njengoko esinye sezixhobo sinenzwa yeminwe kwaye enye ayinayo. Ngaphandle koko ziyafana.
Uphawu lwaseTshayina luhlaziya uluhlu lwalo kwezi veki. Ukuthengisa kwayo kuye kwenyuka kwikota yokuqala, ngakumbi kwintsebenzo elungileyo yesiphelo sayo. Kodwa uphawu lukwafuna ukomeleza la macandelo alula, apho banobukho obuhle. Basishiya ngoku nezi modeli zimbini.
1 Ukucaciswa kweHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019
Ukucaciswa kweHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019
Kuwo wonke lo nyaka sifumene iifowuni ezininzi kolu luhlu lwegama laseTshayina. Ezi zimbini zeHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019 zisebenzela ukugqibezela okuncinci esikufumanayo kuyo. Zilula, nangona beza noluhlu lweziphuculo. Uyilo oluhlaziyiweyo kunye neekhamera ezingcono. Le yinkcazo yeefowuni ezimbini:
Isikrini: 6,26 intshi nge-HD + 19: 9 isisombululo
Inkqubo: Snapdragon 450
Ukugcina ngaphakathi: I-32 GB (iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB)
Cámara trasera: 13 MP ngokuvula f / 1.8 + 2 MP
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8 Oreo ene-EMUI 8.2 njengobume
Ibhetri: I-4.000 mAh
ConectividadI-4G ezimbini, i-Wi-Fi 802.11 b / g / n, iBluetooth 4.2, i-microUSB
abanyeUmfundi ongasemva weminwe (kwi-Y7 Prime)
UbukhuluUbukhulu: 158,92 x 76,91 x 8,10 mm
U bunzima: Iigram ezili-168
U-Huawei uvuselela uyilo loluhlu, ukubheja kwiscreen esinotshi emile okwehla zamanzi kwiifowuni zombini. Ke babheja kuyilo lwefashoni namhlanje. Ukongeza, badibanisa nokusetyenziswa kwezikrini ezinkulu, kwimeko yabo ubukhulu be-intshi ye-6,26. Ezi Huawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019 zikwasishiya nebhetri elungileyo, ene-4.000 mAh. Ke ngoko, sinokulindela ukuzimela kakuhle kule meko, into ebalulekileyo kolu luhlu.
Iikhamera zizinto eziphuculwe ngokubonakalayo kwiifowuni zombini. Zombini iimodeli zifika zinekhamera yangasemva kabini, 13 + 2 MP. Ke sinokuba nethemba lokufumana iifoto ezingcono. Ukongeza, njengesiqhelo kuhlobo lwesiTshayina, zombini iikhamera zine-AI, yokufumanisa izigcawu kunye neziphumo ezingcono ekusebenzeni kwazo. Kwimeko yeHuawei Y7 Prime 2019 sifumana inzwa yeminwe, ebekwe ngasemva. Kwelinye icala, iHuawei Y7 Pro 2019 isebenzisa ukubonwa kobuso njengenkqubo yokuvula kule meko.
Ezi zimbini zeHuawei Y7 Prime kunye neHuawei Y7 Pro Sele bekwiwebhusayithi yamazwe aphesheya yohlobo lwesiTshayina. Kodwa okwangoku, akukho lwazi malunga namaxabiso abaya kuba nawo abonisiweyo. Asinalo naluphi na ulwazi kwixabiso lezi zixhobo zimbini. Ke kule ngqiqo kuya kufuneka silinde ukuze sazi okungakumbi malunga nezi zinto.
Iifowuni ezimbini ziya kuba nohlobo olunye lwe-3/32 GB GB, kunye nokuza ngemibala emibini, imibala emibini eluhlaza okwesibhakabhaka. Nangona iHuawei Y7 yeNkulumbuso ikwasungulwe ngombala wesithathu, ongumthunzi wekorale. Iimodeli ezimbini ezihlaziya uluhlu lokungena lweshishini laseTshayina, ekulindeleke ukuba lisungulwe kungekudala. Siyathemba ukwazi okungakumbi ngokusungulwa kwayo kwezi ntsuku zimbalwa zizayo.
Into esengqiqweni kukuba kukho umahluko phakathi kwamaxabiso abo, kuba iNkulumbuso ye-Y7 iza nesenzwa seminwe. Kodwa okwangoku asazi ukuba ungakanani umahluko oza kubakho phakathi kwamaxabiso eefowuni ezimbini. Ziziphi iimvakalelo ezishiya le mizekelo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei Y7 Prime 2019 kunye neHuawei Y7 Pro 2019: Uluhlu olutsha lokungena lwegama
Ukudlala kukaGoogle kuya kukucebisa ukuba ukhiphe ii -apps ongazisebenzisi
Apha unokukhuphela iphepha lodonga le-Android Q